Ndị Al Shabaab egbuola mmadụ 17 na Mogadishu
O pekata mpe, mmadụ 17 anwụọla n’obodo Mogadishu, isi ala mba Sọmalịa, mgbe ndị agha iyi egwu a na-akpọ Al Shabaab wakporo ndị na-enwere onwe ha aṅụrị n’ogige ụlọ oriri na nkwari a kpọrọ Beach View Café nke dị n’akụkụ mmriri Lido na Mogadishu.
Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii na Mogadishu gwara ndị nta akụkọ n’ihe a mere n’abalị bọrọ Fraịdee.
Al Shabaab bụ otu ogbu ara ọbara ha na ndị Al Qaeda na-adị na mma. Anyị nụrụ na ndị otu a tụrụ ogbunigwe abụọ a kwara n’ime ụgbọ ala na Beach View Café, ebe ndị mmadụ na-ezu ike. Mgbe ndị soja bịara ebe ahụ, ha na ndị Al Shabaab malitere na-akwarịta mgbọ.
Osman Nur, ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii, gwara ndị nta akụkọ na ihe a mere ebe elekere atọ nke isi ụtụtụ taa bụ Fraịdee.